Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mbara ụwa Uranus | Network Meteorology
Dị ka anyị hụrụ n’isiokwu ndị bu nke a ụzọ, nke anyị Usoro anyanwụ mejupụtara 8 mbara ala na mbara ala Pluto nke ahụ kwụsịrị ịbụ onye a tụlere ọzọ n'ihi nha ya. Anyị enyochaworị na omimi Mercury, Venus, Mars, Jupita y Saturn, yabụ anyị nwere ike ikwu maka ya ụwa Uranus. A maara ya dị ka njirimara ntụpọ na-acha anụnụ anụnụ na nke a ị nwere ike ịmụta ihe niile banyere ya.
Want chọrọ ịmatakwu banyere mbara ala Uranus? Guo ka ichoputa ihe nzuzo ya niile.
1 Njirimara Uranus
3 Uranus usoro
A na-ahụta ya mbara ala nke asaa na mbara igwe anyị dịka ọ dị nso na Sun. Nke kacha nso bụ Mercury, ebe dịkarịsịrị elu bụ Neptune. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ, nke oke mbara ala ndị dị na ya (akpọrọ ndị dike gas), Uranus nọ n'ọkwa nke atọ.
O nwere dayameta nke 51.118 kilomita, ọ dịkwa n’ebe dị anya okpukpu iri abụọ karịa nke ụwa anyị n’ihe gbasara Anyanwụ.E nyere aha ya maka nsọpụrụ nke chi Greek a na-akpọ Uranus. N'adịghị ka mbara ala ndị ọzọ ma ọ bụ mbara ala ndị nwere nnukwu ọgba aghara, Uranus nwere ọdịdị dị mfe ma dịkwa mfe. Bluecha acha anụnụ anụnụ na-agbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ abụghị ngosipụta nke uche nke ụzarị anyanwụ. Ọ bụ ihe mejupụtara gas na-eme ka ọ nwee agba ahụ.
Iji nwee ike ịhụ ya site na ụwa, mbara igwe n'abalị ga-enwerịrị ọchịchịrị, ọnwa ga-adị n'ọhụrụ (Lee n'ụzọ nke ọnwa). Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a zutere, na binoculars anyị nwere ike ịchọpụta na ntụpọ acha anụnụ anụnụ.
Ọkà mmụta sayensị chọpụtara mbara ala a bụ William Herschel ọ mere ya na Machị 13, 1781. N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-achọ ịmụtakwu banyere mbara igwe anyị ma chọpụta ihe dị na mbara igwe. Iji chọpụta Uranus, Herschel ji telescope nke ọ wuru onwe ya. Mgbe ọ chọpụtara ntụpọ-acha-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mbara igwe, ọ kọọrọ na ọ bụ kọmpụta. Mana mgbe anwalechara ya, amara na ọ bụ ụwa.
Ọ nọ n'ọnọdụ nke isii na ndepụta nke mbara ala dị na mbara igwe mgbe Jupita gasịrị. Okirikiri ya buru ibu ma ọ na-ewe ihe dị ka afọ 84 iji njem ya karịa ka ọ ga-eme n’ụwa. Nke ahụ bụ, ebe ụwa anyị agbaala Anyanwụ ugboro iri asatọ na anọ, Uranus emeela naanị otu.
O ruru okpukpu anọ karịa ụwa anyị ma njupụta ya bụ naanị 1,29 gram kwa cubic centimita. N'ime ihe dị n'ime ya anyị na-ahụ nkume na ice nke ụdị dị iche iche. Isi okwute juru eju bara ụba na gas ndị kacha biri na mbara igwe ya bụ hydrogen na helium. Ikuku abụọ a bụ akụkụ nke 15% nke oke mbara ala niile.
Nke a kpatara eji akpọ ya nnukwu gas. Uzo nke uzo ya nke ngbaghari bu ihe ruru ogo 90 n'ihe banyere uzo ya. Anyị na-echeta na nke mbara ụwa anyị bụ ogo 23. Uranus nwekwara mgbanaka dịka Saturn, ọ bụ ezie na ọ bụghị otu nha. Nhulata axis na-emetụtakwa mgbaaka na satịlaịtị ha.
N'ihi ebumnuche dị otu a, Uranus nwere naanị oge abụọ n'afọ. Anyanwụ na-enye ìhè n’otu okporo osisi nke ụwa ruo afọ iri anọ na abụọ, na nke ọzọ na-achakwa mkpanaka nke ọzọ. Ebe ọ bụ na ọ dị anya site na Anyanwụ, ọnọdụ okpomọkụ ya dị -42 degrees.
Ọ nwere usoro mgbanaka nke na-enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na nke Saturn ahụ ma ọ bụkwa nke ihe mejupụtara (Lee Gịnị bụ ihe gbara ọchịchịrị?). Dị ka ọ dị na sayensị, ọtụtụ nchọpụta dị mkpa na-eme na ndapụta na mgbe ha na-achọ ihe kachasị mma, na-abụghị. Achọpụtara mgbaaka ndị a na 1985 mgbe nyocha oghere oghere Voyager 2 na-achọ iru mbara ala Neptune. Mgbe ahụ ka ọ pụrụ ịhụ ihe yiri mgbaaka nke Uranus.
Site na teknụzụ kachasị ọhụrụ na nke mepere emepe ọ nwere ike ịmara na otu n'ime mgbaaka ya na-acha anụnụ anụnụ na nke ọzọ na-acha uhie uhie.
Ihe nkịtị na mbara ala nwere mgbaaka bụ na ha na-acha uhie uhie. Agbanyeghị, ọ nwere ihu ọma ịchọta yiri mgbaaka na-acha anụnụ anụnụ. Na ikuku ya na ime ya O nwere 85% hydrogen, 15% helium, na obere methane. Ngwakọta a na - eme ka ọ nwee ụcha acha anụnụ anụnụ.
N'elu mbara ala a enwere oke osimiri mmiri, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na nke anyị nwere n'ụwa. Ikuku ya, nke nwere gas ndị a kpọburu aha, na-aquụ mmiri ka ọ na-agbadata ruo mgbe ọ kpuchiri ice niile na mmiri, amonia na methane gas. Anyi ekwuola na oke osimiri adighi ka ihe obula n’uwa ma obu n’ihi na mmiri na amonia mejuputara ya. Nke a na - eme ka ọ nwee nrụpụta eletriki dị elu ma dị oke egwu.
N'adịghị ka ndị ọzọ gas dị ka Jupiter na Saturn, na Uranus, ice gbara okpukperechi karịrị akarị n'ihi ebe tere aka na anyanwụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị nnọọ ala ma nke a emeela ka ndị ọkà mmụta sayensị kpọọ ha ndị dike ice. Ndị ọkà mmụta sayensị amatabeghị ihe kpatara ya ji chọọ iru ebe a, n'agbanyeghị na a na-eche na, n'oge ọ na - eme, ọ nwere ike ịdaba na protoplanet ọzọ ma ọ bụ nnukwu okwute ọzọ ma na ọ were akụkụ ahụ n'ihi nsị ahụ.
O nwere satellites 27 nke a maara ụfọdụ karịa ndị ọzọ. Satellites ezughi oke inwe ikuku nke ha. Ihe nyocha Voyager 2. chọpụtakwara ha. A na-akpọ ha Titania na Oberon. Onye ọzọ akpọrọ Miranda nwere mmiri na uzuzu uzuzu ma nwee ugwu kachasị elu na mbara igwe niile. Ọ dị elu karịa 20 km. Ọ dị okpukpu 10 karịa nnukwu kaniyon na ụwa anyị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Uranus bụ mbara ala nke na-anaghị akwụsị ịtụ anyị n'anya na nke a ka nwere ọtụtụ ihe ịmara. O kwere omume na site na mmepe nke teknụzụ anyị nwere ike ịmatakwu ịkọwa ihe nzuzo ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Uwa Uranus